RASMI: Laacibkii kooxda AC Milan ee M’Baye Niang oo ku biiray Watford… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa kooxdiisa cusub?) – Gool FM
RASMI: Laacibkii kooxda AC Milan ee M’Baye Niang oo ku biiray Watford… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa kooxdiisa cusub?)
(Watford) 26 Jan 2017 – Hujuumka AC Milan ee M’Baye Niang oo muddooyinkii dhowaa la la xiriirinayey horyaalka Premier League ayaan amaah ugu biiray naadiga Watford.
Laacibkan 22-jirka ah ayay taageerayaasha kooxdu u arkaan mid ma gudbe ah oo aan bandhiggiisa la isku hallayn karin, isagoo ku fashilmay inuu ka mid noqdo laacibiinta aasaasiga u ah da’yarta Rossoneri, waxayna taasi keentay inuu u dhaqaaqo horyaalka Ingiriiska si uu qibrad u soo qaato.
Heshiiska uu M’Baye Niang ugu biiray kooxda Watford ayaa ah amaah inta ka harsan xilli ciyaareedkan, waxaana kooxda Premier League ay dooq u haysataa inay heshiis joogto ah kula wareegto xagaaga, kaasoo ku kacaya adduun dhan £13.5m.
Kooxda Watford ayaa xaqiijisay saxiixa laacibkan, waxaana ay barteeda Twitter-ka ku soo qortay: “M’Baye Niang waxa uu amaah inta ka harsan xilli ciyaareedka ugu soo biiray Watford FC, iyadoo aan dooq u haysanno inaan heshiiskiisa ka dhigno mid joogto ah xagaaga.”
Xiddigan reer France ee M’Baye Niang ayaa durba la sii shaaciyey lambarka uu u xiran doono kooxdiisa cusub ee Watford, waxaana la siiyey oo uu xiran doonaa lambarka 21-aad.
Introducing #watfordfc‘s new number 2️⃣1️⃣, @MBaye9Niang! pic.twitter.com/GbG7HmkBLZ
RASMI: Xavi Hernandez oo heshiis cusub u saxiixay kooxda Al-Sadd
Messi oo hal shardi ku xiray heshiis kordhintiisa Barcelona